iVoomi i2 - တရုတ်ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ချိသည့်နိမ့်ကျသောအသစ်စက်စက်
မကြာသေးမီကအိန္ဒိယ၌စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး iVoomi i2 ကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိရိယာနှင့်ပါလာသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ဆက်ဖတ်ပါ
ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ Bluboo D5 PRO, အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ပျက် !!
ဤနေရာတွင် Bluboo D5 PRO ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လျှို့ဝှက်စွာထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲသင့်အားကောင်းသောဤအရာအားလုံးနှင့်မကောင်းသောအရာအားလုံးကိုဤနိဒါန်းအဆင့် Android terminal နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောပြပါမည်။
Samsung Galaxy S9 Mini သည်ဗီဒီယိုတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Galaxy S9 Mini ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီနှစ်စျေးကွက်ထဲရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Samsung ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်တန်းစား Honor 9i ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော Honor 9i သည်လာမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက TENAA တွင် LLD-AL20 နှင့် LLD-AL30 ဖုန်းများပေါ်တွင်အဓိကအမည်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ဆိုက်၏ဒေတာဘေ့စ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒီကိရိယာကိုစာမျက်နှာနှစ်စောင်နဲ့ထုတ်ဝေလိုက်ပြီ။
Xiaomi Redmi6Pro: အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်မိုဘိုင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခြင်း
Xiaomi သည်မီးမောင်းထိုးပြနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အောင်မြင်သောအာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုက Xiaomi Redmi6Pro ကိုငါတို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ ဤမိုဘိုင်းကို TENAA တွင်ရှေ့ပိုင်းတွင်သာမကအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များနှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 8: ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် animojis များ၏ဓာတ်ပုံပေါက်ကြားခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8: Design, box နှင့် animojis တို့သည်မဖြန့်ချီမီကပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဈေးကွက်ထဲမ ၀ င်ခင် data တွေအများကြီးပေါက်ကြားခဲ့တဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Moto Z3 Play ပုံရိပ်အသစ်များပေါက်ကြား
Motorola Moto Z3 Play ပုံရိပ်နှစ်ခုကိုစစ်ထုတ်သည်။ ပထမဆုံးသောပုံများပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia X6 ကို Flash အရောင်းအဝယ်အသစ်တွင်ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်
Nokia X6 သည်၎င်း၏ Flash ရောင်းချမှုအသစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းမှာအောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo Z1 ကိုတရုတ်ပြည်တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားတစ်ခုအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Vivo က Vivo Z1 ကိုသူ့ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ဆီကိုယူဆောင်လာပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ကတ်တလောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းကကတိပေးထားတာနဲ့အညီဖြစ်တယ်။ ဒီပစ္စည်းက Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ iPhone X ကိုသတိရစေမယ့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်းနံပါတ်2ကိုအပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
Essential Phone2ထွက်ရှိမှုကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ အန်ဒီရူဘင်၏အဆိုအရကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်းကိုဈေးကွက်တွင်မရောင်းချရန်အကြောင်းပြချက်များပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung က Apple ကိုကူးယူရန်ဒေါ်လာ ၅၃၉ သန်းပေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်
Samsung က Apple ကိုဒေါ်လာ ၅၃၉ သန်းပေးရမယ်။ မူလ iPhone ဒီဇိုင်းကိုကူးယူခြင်းအတွက်ရရှိသောဒဏ်ငွေကိုကိုရီးယားကုမ္ပဏီကရရှိခဲ့သည်။
Bixby သည် Samsung ထုတ်ကုန်များအားလုံးတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်
Samsung ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Bixby ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Wizard ကိုအသုံးပြုရန်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးသောအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ် Aermoo M1
IP1 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ၂၁ Mpx ကင်မရာ၊ shock protection၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်ကြီးမားသော 68 mAh ဘက္ထရီပါ ၀ င်သည့် Aermoo M21 နှင့်တူညီသည်။
Xiaomi နှင့် Apple သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်တွင်လွှမ်းမိုးထားသည်
Xiaomi နှင့် Apple တို့သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်ရန်ပြိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆက်လက်၍ ဆက်လက်တိုးတက်နေသည့်ဤစမတ်နာရီနှင့်လက်ကောက်များ၏ဤအပိုင်းတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Xiaomi Redmi6သည် TENAA ကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်
တရား ၀ င် TENAA ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Xiaomi Redmi6၏လက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းဟာ Redmi5ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်တရုတ်ကုမ္မဏီရဲ့အကျော်ကြားဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Xiaomi Mi 8 ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီပေါက်ကြားခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8 ယခင်က Mi 7- ဟုလူသိများခဲ့သော Weibo တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ Weibo တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မင်းတို့သိအောင်ငါတို့ပြောတယ်။
Xiaomi က Xiaomi Mi7ရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
အတည်ပြုပြီး - Xiaomi Mi7မရှိ၊ Mi 8 ကိုသာဖြန့်ချီမှာပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ပွဲတော်မှာအဆင့်မြင့်အသစ်တစ်ခုကိုသာတွေ့မြင်မယ်လို့အတည်ပြုချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိပါ။
Qualcomm Snapdragon 710: အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ် ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူ့ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆူညံမှု - ဆိုနီသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်
ဆူညံမှု - ဆိုနီသည်စမတ်ဖုန်းများပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည့်ဤသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Vivo Apex ကိုဇွန် ၁၂ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
ယခု Vivo Apex ဖုန်းမျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့်လက်ဗွေဆင်ဆာပါရှိသည်
Android TV အတွက် Twitter ကမနက်ဖြန်အလုပ်လုပ်တော့မည်မဟုတ်
မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Android TV အတွက် Twitter application သည်အလုပ်ကိုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလိုက်ဖက်သည့် devices များ၏ application store မှပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
MediaTek Helio P22: အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ်
Helio P22: MediaTek ပရိုဆက်ဆာအသစ် ကြီးထွားလာနေသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်လုပ်သောပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL U18 သည် "X Notch" ပါ ၀ င်သည့်မျက်နှာပြင်ကျယ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး ၄ င်း၏4GB RAM, 64 GB Memory နှင့် 4000 mAh ဘက်ထရီတို့ကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, စျေးနှုန်းနှင့်တကယ်ထိုက်တန်လျှင်ပြောပြပါ။
Lenovo သည်တရုတ်ဈေးကွက်၏ ၀.၄% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စျေးကွက်ဝေစုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အနိမ့်ဆုံးရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 9, Mate9Pro နှင့် Mate9Porsche Design တို့မှနောက်ဆုံးပေါ် update ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန် facial recognition system ကိုပေးသည်။
တေးဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုဒီရေသည်အချက်အလက်များကိုလိမ်သည်ဟုစွပ်စွဲသည်
ဒီရေ၏ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချို့သောအနုပညာရှင်များနှင့်ပြproblemsနာများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။
WhatsApp သည်အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း app ကိုမိတ်ဆက်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းသို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဘာလိုနေတယ်ဆိုတာ! Facebook က root ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည်
Facebook application သည်အသုံးပြုသူများအား root permissions ကိုတောင်းဆိုသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် root permissions ပေးရန်တောင်းဆိုသည့် application တွင်တွေ့ရှိရသော bug အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Pepephone Unbeatable နှုန်းကိုရယူပါ။ 19 GB မိုဘိုင်းဒေတာနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်အကောင်းဆုံးနှုန်းကိုရနိုင်သည့်ဤပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia 2,3နှင့်5(2018) ကိုမေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်
မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Nokia သည် Nokia 2,3နှင့်5(2018) ကိုတင်ဆက်နိုင်သည်။ ရုရှား၌ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လကုန်တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းအသစ်များနှင့်တွေ့လိမ့်မည်။
ARCore ၏တိုးမြှင့်မှုသည် LG G6, Xperia XZ1 နှင့်အခြားများစွာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
ARCore, ဂူဂဲလ်ရဲ့တိုးပွားလာတဲ့အမှန်တရားဟာဖုန်းတွေအထိရောက်ခဲ့တယ်။ Android ဖုန်းအသစ်များအတွက်လာမည့်ကုမ္ပဏီ၏အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က Galaxy J6 နှင့် Galaxy J4 ကိုစတင်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်
Samsung က Galaxy J6 နှင့် Galaxy J4 ကိုတင်ဆက်ရန်ဖိတ်ကြားချက်များကိုပေးပို့ခဲ့သည်။
Nokia X6 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအလယ်အလတ်အဆင့်သစ်အကုန်လုံးကိုသိထားပါ
Nokia X6 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်တင်ဆက်လိုက်သောအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်နှင့်လာမည့်နေ့ရက်များတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးကတိပေးထားသောအရာများနှင့်အညီရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံး၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိ!
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် Elephone သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
Elephone သည်နွေရာသီတွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ရန်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia5နှင့်6တွင် Android P ရှိမည်ဟု Nokia ကအတည်ပြုသည်
Nokia5နှင့်6တွင် Android P. သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများရှိလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုပြီးသောအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းနှစ်လုံးသို့လာမည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ selfies တွေအတွက်ရှေ့ကင်မရာမှာ Oppo ရဲ့အဆင့်မြင့်နိမ့်ကျတဲ့ Oppo F7 လူငယ်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်အလက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
Android P ၏နောက် version သည်လာမည့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလာမည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုယနေ့ Pixel2launcher မှပြသထားသည့်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းပေးပို့သည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Nomu M6
စျေးကွက်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကြမ်းတမ်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးနှင့်စတိုင်ကျဆုံးသော Nomu M6 နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ "ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းများ" အားလုံးအတူတူပင်မဟုတ်ပါ။ ယင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဤလမ်းကြမ်းမဲ့ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
TENAA အရ Vivo X21i ၏စစ်ထုတ်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ယနေ့တွင် TENAA၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထုတ်ကုန်များရောင်းချမည့်စမတ်ဖုန်းများအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုရမည့်တရုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Vivo X21i ၏အရည်အသွေးများစွာကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် X21 နှင့်ဆင်တူသည်။
Vodafone One Light - ဤနှုန်းထားအပေါ် ၅၀% လျှော့စျေး။ အိမ်တွင်အင်တာနက်၊ မြေအောက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ မိုဘိုင်းဒေတာနှင့်သင့်မိုဘိုင်းမှခေါ်ဆိုမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသောဤအော်ပရေတာနှုန်းနှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါကယခုရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်သည်။
Google Assistant နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအားလုံးကို Google I / O 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သည်
Google Assistant - Google I / O 2018. မှာတင်ထားတဲ့သတင်း။ ကုမ္ပဏီရဲ့လက်ထောက်မကြာခင်မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို Google I / O 2018 မှာတင်ဆက်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်ဖုန်းဝယ်လိုအားသည် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံရှိစမတ်ဖုန်းဝယ်လိုအားသည် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းနိုင်ငံအတွင်းဖုန်းရောင်းအားကျဆင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Android P သည်အက်ပ်များအားတက်ကြွသောဆက်သွယ်မှုများကိုထောက်လှမ်းရန်ခွင့်မပြုပါ
Android P သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုတက်ကြွသောဆက်သွယ်မှုများမမြင်စေရန်တားဆီးလိမ့်မည်။ operating system ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူလာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက် Google application များက icon အသစ်များကိုလွှတ်ပေးမည်
Android အတွက် Google application များမှာ icon အသစ်များပါလိမ့်မယ်။ ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်း၏အိုင်ကွန်များတွင်ထည့်သွင်းထားသောဤပြောင်းလဲမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ကြော်ငြာအခမဲ့ဗားရှင်းကို subscription ဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ပေးဆောင်ရသောဗားရှင်းစတင်ရန်လူမှုကွန်ယက်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Adobe Photoshop Express ကို (Perspective Correction function) ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် update လုပ်သည်
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Adobe Photoshop Express ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော feature အသစ်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်လိုက်သည်။
သင်တစ်လလျှင်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့်ယူရို ၃.၉၅ ဖြင့်သင်သွားနိုင်မည့်မိုဘိုင်းဒေတာ 1 GB ကိုကမ်းလှမ်းသောဤမိုဘိုင်းသမ္မတနိုင်ငံနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။ ယခုငှားရမ်းပါ။
ဤစာရင်းတွင်မိခင်များနေ့၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ အနားယူခြင်းနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များအတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
Android Go ပါ ၀ င်သည့် Asus ZenFone Live L1 အသစ်၏ထူးခြားချက်များ
Asus ZenFone Live L1 နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး Android Go terminal သည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်နိမ့်နိမ့်အကွာအဝေး၏ပုံမှန်လက္ခဏာများ၊ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Facebook F8: ကွန်ဖရင့်၌တင်သည့်သတင်းများ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် F8 - အဖြစ်အပျက်မှာသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာကုမ္ပဏီတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android 8.1 Oreo update ကို Razer Phone အတွက်ရပ်နားလိုက်ပြီ
Razer ဖုန်းမှ Android 8.1 Oreo ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ ဆင်းမ်ကဒ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ဖုန်းအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ရသည့်အကြောင်းရင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Coolpad Cool 2, အာရှမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်
Coolpad သည်နောက်ဆုံးပေါ်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Coolpad Cool2ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် 2016: 16 မျက်နှာပြင်၊ Qualcomm SD9 octacore ပရိုဆက်ဆာ၊ 652GB RAM နှင့်အတူလက်တွဲလာသည့် Coolpad Cool4၏ဆက်ခံသူဖြစ်သည်။ 32GB ROM သည် အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Android application များ
ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Android application လေးခု။ ဓါတ်မတည့်သူများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသောဤအပလီကေးရှင်းအပလီကေးရှင်းကိုရှာဖွေပါ။
နယူး Oppo A3 ။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Oppo က၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Oppo A3 ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့်စမတ်ဖုန်းနှင့်အထူးကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒီစက်ပစ္စည်းမှာအထင်ရှားဆုံးသောအရည်အသွေးများအနက် ၆ လက်မကျော်မျက်နှာပြင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။
Android Go ကိုလည်း Samsung ၏လက်ကိုင်ဖုန်းများသို့ ၀ င်ရောက်မည်
Samsung က Android Go ဖုန်းတစ်လုံးကိုအလုပ်လုပ်မှာပါ။ Android Go နှင့်အတူအဆင့်နိမ့်နိူင်မည်ကိုပြသသောဤယိုစိမ့်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Spotify သည် shuffle mode ကိုအဆုံးသတ်စေပြီး mobile data သုံးစွဲမှုကို ၇၅% လျှော့ချပေးသည်။
ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ Spotify သည် Spotify ၏အခမဲ့ဗားရှင်းသို့လာမည့်သီတင်းပတ်များ၌ရောက်ရှိလာမည့်သတင်းများကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်သီချင်းများကျပန်းပြန်ဆိုခြင်းအဆုံး၌ထင်ရှားသည်။
ထိုင်ဝမ်gရာမ Asus က Asus ZenFone Max Pro M1 ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပရိသတ်နှင့်ပရင့်ထုတ်နိုင်မှုသည်ပရိသတ်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုလိုချင်သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
Google Assistant ကမည်သည့်အဆက်အသွယ်များကသင့်မိသားစုဖြစ်သည်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်
ဂူဂဲလ်လက်ထောက်ကသင်၏အဆက်အသွယ်များထဲမှမည်သည်သင့်မိသားစုဖြစ်ကြောင်းသိလိမ့်မည်။ မကြာမီအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏လက်ထောက်သို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင် ၄ င်းတို့၏မွေးနေ့များကိုသင့်အားပြန်ပြောပြရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား Jazztel ပရိုမိုးရှင်းအသစ်နှင့်အတူအချိုးကျသောအမျှင်မျှင်များ၏ 50Mb ခံစားပါ။ ၎င်းသည်ကြယ်၏နှုန်းကိုအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိစေသည်။ သင်၏ဖုန်းငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်သင်သိမ်းဆည်းလိုပါကမြန်မြန်လုပ်ဆောင်ပါ။
ရုရှားအစိုးရသည်နိုင်ငံသားများအား Telegram ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ကိုတားဆီးရန်အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခုသူတို့သည် app ကိုစတိုးဆိုင်များမှဖျက်လိုကြသည်
Movistar ၏ 50 Mb Fiber Optic Rate ကိုအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ။ အထူးနှုန်းများစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှုန်းထားကိုပေးသောအော်ပရေတာ၏ဤမြှင့်တင်ရေးအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ မြန်မြန်လုပ်ပါ!
WhatsApp Plus သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူသောအက်ပလီကေးရှင်း။ မသုံးပါနဲ့!
Meet WhatsApp Plus သည်အန္တရာယ်ရှိသောတရား ၀ င်မဟုတ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်သင်၏ကိရိယာတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအကောင့် (၄) ခုရှိသည်ဟူသောအချက်ပါ ၀ င်သောသင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူသောအန္တရာယ်ရှိသည့်တရားမဝင် application ဖြစ်သည်။ ဒီလှည်ထောင်ချောက်ထဲမကျဘူးဆိုတာရှာပါ။
ရုရှားအစိုးရသည်၎င်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်စာဝှက်စနစ်သော့များကိုလွှဲပြောင်းရန်ငြင်းဆန်ခြင်းဖြင့် Telegram အသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်။
Ikea ၏Trådfriသည် Google Assistant နှင့် Google Home နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤမီးသီးများနှင့်ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီမှလက်ထောက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia 1: ကုမ္ပဏီ၏ Android Go သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည်
ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ Nokia သည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင် Nokia 1 ကိုတင်ဆက်ပြီးနောက်၎င်းသည်ဈေးသက်သာသည့် Android Go ထုတ်ကုန်မိုဘိုင်းဖြစ်သောစပိန်နိုင်ငံသို့ hardware ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသည့်နိမ့်ကျသောဖုန်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Honor 7C နှင့် 7A တို့သည်စပိန်သို့တင်ပြပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်
တရားဝင် Honor 7C နှင့် Honor 7A တို့ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာပြီးလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှရောင်းချနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူဒီကိရိယာနှစ်ခုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Xiaomi Mi6ဗားရှင်းအချို့ကိုရောင်းလိုက်သည်
Xiaomi Mi6ဗားရှင်းအတော်များများကိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ Xiaomi Mi7၏ရောက်ရှိမှုသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်ဟုဆိုလိုသောသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Xiaomi ၏ Black Shark ပုံရိပ်အသစ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
Xiaomi Black Shark ၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါက်ကြားခဲ့ မကြာမီစျေးကွက်သို့မကြာမီရောက်လာတော့မည့်မျှော်လင့်ချက်များစွာထွက်ပေါ်လာသည့် Xiaomi ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE Iceberg: ဖန်သားပြင်ကို double notch ဖြင့်ပြသခဲ့သည်
ZTE Iceberg: ဒီဇိုင်းကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်တုံးဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါက၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ဆထစ်ပေါ်လောင်းခြင်းဖြင့်အံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
Samsung Pay နှင့် PayPal တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်စတင်ဝင်ရောက်ကြသည်
Samsung Pay နှင့် PayPal တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပေါင်းစည်းထားသည်။ ကြေငြာပြီးတစ်နှစ်အကြာအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ဖုန်းနှစ်လုံးတွင် Snapdragon 670 ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်ပါရှိသည်။ ဒီပရိုဆက်ဆာကိုဒီနှစ်ဖုန်းနှစ်လုံးမှာသုံးမယ့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6ဒီဇိုင်း၏စီစစ်ထားသောပုံစံအသစ်များတရုတ်စျေးကွက်သို့မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့်၎င်း၏ဒီဇိုင်း၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုစစ်ထုတ်သည့်အရာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည် Kirin 980 ထုတ်လုပ်မှုကိုယခုသုံးလပတ်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်
Huawei သည် Kirin 980 ကိုယခုလတွင်စတင်ထုတ်လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်နှင့်အတူတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Essential သည်လာမည့် Essential ဖုန်းဖြင့်၎င်း၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်း၏ကင်မရာကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်
Essential Phone, Essential Phone ကုမ္ပဏီပူးတွဲတည်ထောင်သူ Andy Rubin ကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဖုန်းသည်၎င်း၏ကင်မရာများအတွက်ဝေဖန်မှုများစွာခံနေရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာအရည်အသွေးသည်သူတို့ဖြစ်သင့်သလောက်မကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏နောက်စမတ်ဖုန်းဖြင့်ပြောင်းလဲတော့မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Xiaomi မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၁၂၀ ကျော်ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားသည်
Xiaomi သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၁၂၀ ရောင်းလိုသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသည့်အစီအစဉ်များကိုယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးရောင်းချလိုသည်။
Honor 10 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
10 ပထမ ဦး ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကို Honor ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုလူသိများပြီးတရုတ်ပြည်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy A6 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ထားပါသည်
Samsung Galaxy A6 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှပြင်ဆင်နေသည့်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမြင်တွေ့နိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Android ကုဒ်သည် Pixel3ကိုမတော်တဆပေါက်ကြားစေခြင်း။ Android ကုဒ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Pixel အသစ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ဟူသောအတည်ပြုချက်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ပရိုမိုးရှင်းအတွက်MásMvilမှဖိုင်ဘာအသစ်၊ ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်းနှုန်းထား။ ပထမသုံးလအတွက်အော်ပရေတာကစျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်စတင်နေသောဤနှုန်းသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ နှုန်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါကဒီမှာစာချုပ်ချုပ်ပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Samsung ကမတူညီသော Galaxy J3s သုံးခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Samsung သည်ယခုနှစ်တွင် Galaxy J3 ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုထုတ်လုပ်မည် ယခုနှစ်နိမ့်ကျသောဖုန်း၏ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုစတင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi7ရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်မှာလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားနိုင်တယ်လို့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်
Xiaomi Mi7မျက်နှာပြင်မှာလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထံမှသတင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက high-end တွင်လက်ဗွေအာရုံခံစနစ်တပ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Xiaomi Mi Note3ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
ဆယ်ရက်ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်တွင် Xiaomi Mi Note3၏စပိန်ဘာသာတွင်အများဆုံးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ နိမ့်ပါးသောအလယ်အလတ်တန်းစားစျေးနှုန်းဖြင့်သင့်ကိုငါထားခဲ့မည်။
Aprilပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ Motorola Moto G19 မိသားစုအသစ်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်
Motorola ကeventပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာဘရာဇီးနိုင်ငံ Sao Paulo မှာကျင်းပမယ့်ပစ်လွှတ်ပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
ကုမ္ပဏီမှအသိအမှတ်မပြုသောထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကို Google ကကန့်သတ်ထားသည်
Honor 10 ကိုမေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာတင်ပြသွားမှာပါ
Honor 10 ကိုမေလ ၁၅ ရက်တွင်တရားဝင်မိတ်ဆက်မည်။ မကြာမီဈေးကွက်သို့မကြာမီရောက်ရှိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Snapense Dragon 660 SoC ပါဝင်သည့် Hisense V + ဖြစ်သည်
မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သောကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ် Hisense V + နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဤမိုဘိုင်း၏အားသာချက်မှာ၎င်း၏ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းအပိုင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Qualcomm SD660 ချစ်ပ်၊ 6GB RAM နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကတင်ပြ!
OnePlus6က Huawei P20 လိုပဲ Notch ကိုဖျောက်ထားလိမ့်မယ်
OnePlus6သည်ဖန်သားပြင်၏အထစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများကို screen notch ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ခွင့်ပြုကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Blackview BV 9000 Pro ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Blackview BV 9000 Pro, အကွာအဝေး၏ထိပ်တန်းထိုက်တန်နံပါတ်များနှင့်အတူယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး off- လမ်းစမတ်ဖုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သောရေစိုခံသည်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဖုန်းထက်အများကြီးပိုပါတယ်
အာရှကုမ္ပဏီကြီး Asus သည်ထိုင် ၀ မ်အတွက် ZenFone5အတွက်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင်ပြသခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ရက်မှာAprilပြီ ၁၂ ရက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Xiaomi Mi Mix 2S ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချသည်
Xiaomi Mi Mix 2S သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အပြည့်အ ၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။ သင်၏တိုင်းပြည်ရှိစတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းပြီးသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ရောင်းအားအောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Converged Yoigo Tariff - အကန့်အသတ်မရှိသောဒေတာဖြင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းလိုင်း
အကန့်အသတ်မရှိသောဒေတာများရရှိရန်အတွက်နိုင်ငံတော်နှုန်းစျေးကွက်တွင်ရှေး ဦး ထားသည့်အော်ပရေတာတင်ပြသောနှုန်းသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်ဆိုတာသိချင်လား။
Xiaomi gamer mobile ၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
Xiaomi ၏ Black Shark ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်တွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီးသားတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ gamer ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus CEO ဖြစ်သူသည် OnePlus6၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
OnePlus ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် OnePlus အကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များပေးသည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည့် high-end ဖုန်းနှင့်ပိုမိုသိရှိလိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
Galaxy S9 Mini အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Galaxy S9 Mini ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သော Samsung ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Google ကစျေးသက်သာတဲ့ Pixel ကိုလုပ်မယ်
Google ကဒီနှစ်စျေးသက်သာတဲ့ Pixel ကိုရောင်းချတော့မှာပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ချိလိုသောမော်ဒယ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအလယ်အလတ်တွင်ရှိလိမ့်မည်။
Galaxy A6 နှင့် A6 + တို့သည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရကြသည်
FCC က Samsung Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 + ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သောတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiao AI: Xiaomi ရဲ့အတုထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက်ကအစစ်အမှန်ပါပဲ
Xiao AI: Xiaomi ရဲ့လက်ထောက်ဟာတရုတ်ပြည်မှာအဖြစ်မှန်ပါပဲ။ တရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုအခြေခံပြီးတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ virtual လက်ထောက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကုမ္ပဏီ၏ low-end အသစ်ဖြစ်သော Honor 7A ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အား Honor 7A နှင့်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူတင်ပြပါသည်။ ၎င်းကိရိယာတွင်အသုံးပြုသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာပြင်၊ ပျမ်းမျှဘက္ထရီနှင့်အခြားအရာများကြောင့်၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအရည်အသွေးများစွာဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များပါရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Nubia Z18 Mini ကိုAprilပြီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
Nubia Z18 Mini ကိုAprilပြီ ၁၁ ရက်တွင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကျော်ကြာမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်၏တင်သည့်ရက်စွဲကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi A2 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi A2 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိမည့် Android One အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Snapdragon 841: ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်စျေးကွက်သို့ရောက်ရန်မျှော်လင့်သောအမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6ဗားရှင်းများ၏စျေးနှုန်းများကိုစစ်ထုတ်သည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်သောအခါတရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှအဆင့်မြင့်ဖုန်း၏မတူညီသောဗားရှင်းများ၏စျေးနှုန်းများကိုရှာဖွေပါ။
Vivo Y71 အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စတင်ရောင်းချသည့်နေ့နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောစျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။